Noendahina, naolana, novonoina: fatin-dehilahy sy vehivavy feno ratra hita tetsy Tanjombato | NewsMada
Noendahina, naolana, novonoina: fatin-dehilahy sy vehivavy feno ratra hita tetsy Tanjombato
Razana roa (lehilahy sy vehivavy), samy nahitana dian’antsy, omaly maraina, no hitan’ny olona, teny Tanjombato, teo amin’ny toerana antsoina hoe Ranovaky. Raha ny tombantombana, noendahina, naolana, izay vao novonoina izy ireo. Habibiana…
Olona sendra nandalo teny an-toerana no nahita ny razana ka niantso ny polisin’ny Soavina. Tonga teny an-toerana ireo nanao ny fanadihadiana avy hatrany. Araka ny nambaran’ny polisy, hita faty niboridana tao anaty rano ilay vehivavy tokony ho 30 taona, raha somary nihataka teo akaikin’ny fanaovana biriky kosa no hita ilay lehilahy, manodidina ny 30 taona. Voalaza fa voatsindrona zava-maranitra ny vatan’izy roa ireo satria misy ratra hita toa ny dian’antsy eo amin’ny nonon’ilay vehivavy havia, raha manodidina ny fito kosa ny ratra hita teny amin’ilay lehilahy. Ity farany, izay mbola hita teny aminy ny akanjony. Tokony ho 100 m teo kosa, nahitana sakaosy nisy ny lamba sy fotsimbary, izay mety azy reo. Marihina fa tsy nahitana kara-panondro na taratasy famantarana azy, izy roa ireto.
Nalefa eny amin’ny tranom-paty ny razana, ary mandray an-tanana ny fanadihadiana ny polisy. Ny olona teny an-toerana tsy nisy nahalala azy ireo. Mandeha ny tombantombana fa mety voaendaka izy ireo. Ilay vehivavy mety naoloana ary navarina tanaty rano. Ny olona monina eny an-toerana, maro ny milaza fa matetika isehoana fanendahana iny faritra antsoina hoe Cannibal iny. “Mafàna amin’ny asa fanendahana eny an-tanàna. Efa maromaro ny tranga niseho tety aminay, saingy tazanim-potsiny izany”, hoy ny filazan’ny mponina.
Mirongatra ny asa fanendahana
Tsy ny eny Tanjombato sy ny manodidina ihany no mirongatra ny asa fanendahana fa manerana ny renivohitra mihitsy. Ny loza, sahy mamono mandatsak’aina ireo olon-dratsy. Manao ny ezaka ihany ny polisy manoloana izany. Roa lahy voalaza fa mpanendaka sady mpanao haiady tratra teny Anjanahary, ny alarobia teo. Efa nifanenjehan’ny polisy ny iray, ny herinandro teo fa tsy tratra. Tamin’ity kosa, tsy afa-bela intsony. Anisan’ny mampitondra faisana eny amin’iny faritra Anjanahary sy ny manodidina iny ireo. Olana amin’ny firongatry ny asa fanendahana ny fahamaivanan’ny sazy azon’ireo olon-dratsy ireny. Vetivety ihany ny amitany sazy, mivoaka avy eo ary mamerina indray. Tranga toy izany, mahatonga ny fitsaram-bahoaka any amin’ny faritra any. Soa ihany fa tsy mbola mitranga loatra eto an-dRenivohitra ny fitsaram-bahoaka.